Fiantraikany & fihenan'ny tontolo iainana | Fiaretana haran-dranomasina
Ny fahatakarana sy ny fiatrehana ny fiatraikan'ny tontolo iainana amin'ny fiompiana trondro any amin'ny faritry ny haran-dranomasina dia ilaina amin'ny mpitantana ny haran-dranomasina. Ny sokajy efatra lehibe amin'ny fiantraikan'ny tontolo iainana dia:
Ny fiantraikany amin'ny tahiry ala
Misy fiantraikany amin'ny toeram-ponenana
Ireo fiantraikany efatra mifandraika ireo dia azo resahina amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny fifantenana karazana karazany, karazana fitaovana, fampiasana teknolojia, fitsipika manohana ny fitantanana maharitra, ny tombana ny fiantraikan'ny tontolo iainana, ny fisafidianana ny toerana ary ny fomba fanaovana drafitra eo an-toerana. ref Ny tsirairay amin'ireo fiantraikany ireo dia tokony horesahina tsara sy hokarohina mandritra ny drafitra sy ny fitantanana ny tetikasa mba hampihena ny risika. Ny paikady lehibe momba ny tontolo iainana sy ny paikady fanalefahana dia faritana amin'ny antsipiriany eto ambany ary azo sintonina ihany koa misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEtomanokatra fisie PDF .
Stocks amin'ny bibidia
Ny fomba fiasa mahazatra ho an'ny toeram-piompiana tsirairay dia tokony hampiharina mba hanomezana rafitra tsy miova sy arovana mba hampihenana ny risika sy hanamafisana ny paikady fanalefahana. Ho fanampin'izany, ny fampahalalana sy ny fahalalana mikasika ny fitsipiky ny fitantanana maharitra, ny fipetrahana, ny fandrindrana ny toerana ary ny fitantanana ny faritra dia zava-dehibe amin'ny fitantanana am-pahombiazana ny toeram-pambolena fiompiana anaty akorabato.
Iray amin'ireo fiantraikany lehibe amin'ny fiompiana anaty rano tahiry dia dia ny fitrandrahana fry tsy miova avy amin'ny ecosystem. Raha tsy maharitra ny fitrandrahana, dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny voka-dratsin'ireo karazana nesorina ireo noho ny tsy famelana trondro ampy hahatratra ny fahamatorana ara-nofo sy hiteraka. Ary koa, ny fandosirana trondro dia mety hitranga raha tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ny haraton'ny tranom-borona ary miarina ny lavaka, na noho ny fomba ratsy eo amin'ny fitahirizana, ny fijinjana na ny famindrana trondro. Ny trondro nambolena dia azo alefa any anaty ala ary mety hisy fiantraikany amin'ny tahiry dia amin'ny alàlan'ny fampidirana aretina sy fanalefahana ny dobo fototarazo amin'ny alàlan'ny fifampiraharahana amin'ireo mponina dia. Raha tanterahina ny fikolokoloana sy ny fandaminana tsara dia azo sorohina ny lavaka harato sy ny fitsoahan'ny trondro. ref Ho fanampin'izay, raha voafehy tsara sy ny fiantraikany dia ahena, ny tranom-borona ao amoron-dranomasina dia mety ho lasa fitaovana fampivondronana trondro (FAD) ary mety hanome lanja ny toeram-ponenana.
Fiantraikany amin'ny toeram-ponenana
Ny fametrahana sy ny fampandehanana ireo tranom-boaloboka any amin'ny morontsiraka dia mety misy mivantana na an-kolaka misy fiantraikany amin'ny toeram-ponenana. Ny fiatraikany mivantana dia mety amin'ny endrika famindran-toerana na fanesorana ireo toeram-ponenana mba hanomezana toerana ho an'ny fotodrafitrasa ho an'ny tranom-borona, toy ny fanapahana ala honko amin'ny fananganana dock na pier, na fahasimbana amin'ny vatohara sy ny ahidrano mandritra ny fametrahana vatofantsika sy lanja. . Mila mipetraka alohan'ny toeram-pambolena sy fiompiana alohan'ny fananganana sy fametrahana ny tranom-borona mba hamaritana ny toerana mety indrindra rehefa jerena ny onja, ny onja, ny halalin'ny ranomasina, ary ny halaviran'ny toeram-ponenana mora tohina toy ny haran-dranomasina, honko, ary fandriana ahidrano. Ny fiantraikany tsy mivantana amin'ireo toeram-ponenana ao an-toerana dia misy ny fahasimban'ny vondrom-piarahamonina benthic sy ny fihenan'ny kalitaon'ny rano amin'ny fisotroan-dronono. Ny fampiharana ny sakafo ara-dalàna dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ireo fiantraikany ireo. ref
Ny kalitaon'ny rano amin'ny faritra manodidina ny tranom-borona dia tsy maintsy dinihina sy arahi-maso. Ny fitehirizana sy fihazonana trondro be loatra amin'ny toerana kely dia afaka mampihena ny kalitaon'ny rano amin'ny alàlan'ny fampihenana ny haavon'ny oksizena sy ny fitomboan'ny haavon'ny azota, ny fosforôra ary ny amoniaka, izay avela handalo haavo tsy azon'ny tontolo iainana na aelezana, dia mety hiteraka voka-dratsy ny faritra eo an-toerana. Ny fanaraha-maso am-pitandremana sy mazoto dia mila atao alohan'ny sy aorian'ny fametrahana ny tranom-borona mba hamaritana raha misy fitomboan'ny otrikaina ao amin'ilay tranokala.
Toy ny rafi-pamokarana sakafo hafa, raha be loatra ny biby tazonina amin'ny toerana kely ary tsy omena fepetra tsara indrindra ho an'ny fahasalamana sy ny fitomboana dia mety hisy ny fipoahan'ny aretina sy katsentsitra. Ny fitantanana araka ny tokony ho izy dia mila manadihady ny hakitroky ny fitehirizana, ny onja haingana hanondrahana rano madio sy hivoahana, ny kalitaon'ny sakafo avo lenta, ny protokoloky ny sakafo mahazatra, ary ny fanaraha-maso amin'ny ankapobeny ny fitondran-trondro sy ny fahasalamana. Raha vantany vao manomboka mampiseho toetra sy fomba fitondran-tena sasany izay mety manondro aretina na katsentsitra ny trondro, dia mila atao ny fitsaboana marina sy mifanaraka amin'izany mba hampihena ny mety maty. ref
Ny fizarana manaraka dia mamaritra ny sokajy efatra lehibe amin'ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny antsipiriany.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoInona no fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny tontolo iainana?
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoRafitra rafitra ho an'ny fiompiana ambanivohitra